Zvikonzero Zvikuru Zvokushanyira China
Uchitsvaga kana rwendo kuenda kuChina runofanira kuva rakatevera pane rwendo rwekufamba kwako? Kana kuti zvimwe iwe hauna chokwadi kana China inogona kukodzera zvido zvemhuri yako, kana maitiro ekufamba. Pasinei nokuti uri kutogadzirira rwendo kana uri kutengesa kumativi akasiyana, urongwa hwezvikonzero huchakubatsira kuti uone kana rwendo rwekuChina rwakakunakira iwe.
Onai Zvose Zvinokonzera Ndizvo
Andrew Rowat / Stone / Getty Images
Zvakaoma kuziva kuti China yakaita sei pasina kuenda ikoko. Musha kune imwe yechishanu yenyika yose, China ine zvakawanda zvokupa munhu wose uye ichava nechokwadi chekupa chiitiko chisingakanganwiki. Usatora mamwe mazwi ezvo - zviongorore iwe pachako!
Super Kid-Friendly Family Holiday
Kufamba nevana, kunyanya vana vaduku chero kupi zvingave kwakaoma. Kurara kwemapurogiramu kunokanganiswa. Diapers inodiwa. Rwendo runoenderera mberi. Pasinei neizvi, kuona nyika kuburikidza nemeso emwana wako hakungakanganwiki. Uye kune dzimwe nyika uko kufamba nevana kunogona kutarisirwa uye kunonakidza kudarika vamwe.
Iwe uchawana China imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzemwana pasi pano. Iyo inosvika kumusoro uko naI taly neGreece. Hapana anozonyanya ziso pavanenge vachiita ruzha muhotera yekutsvaga kana pavanodya. Nepo pasina huchashandura matafura munzvimbo dzakawanda dzokuzorora, uchawana rubatsiro kune dzimwe nzira.
Uye vana vako vachave nenguva yakaisvonaka chero bedzi iwe uchigadzira rwendo rwako kuti uise zvinhu zvakawanda zvavanoda. Kune zviito zvevana zvevana vanobva mumamyuziyamu uye dzimba dzomukati mumaguta makuru, kuongorora zvinhu zvaunofarira kunze.
Kanganwa zvaunoziva nezvekudya kweChina. Uye kukangamwa zvaunofunga kuti unoziva nezvekudya kweChina .
Uya kuChina uye tanga kubva pakutanga. Iwe unogona kutotarisa hutori hwekutakura hunoisa muromo wako. Zvokudya zveChinese zvakasiyana-siyana mupurovhinzi uye nzvimbo. Nharaunda imwe neimwe ine zvido zvayo uye zvinonaka. Shanghai cuisine inofungidzirwa kuti inotapira, Sichuan inozivikanwa nokuda kwayo spiciness. Iwe uchashamisika pane zvaunowana pamusoro pezvokudya zveChinese apo uri pano uye uchitenda ini, chikafu chinomira pachako sechikonzero chakanaka kuuya!
Makore 5 000 eMuchirwo
ragon Bombing Mutambo wegore reChina Chinese muTaiwan. Ivan / Getty Images
Kubudirira kweChinese kunosvika zviuru zvemakore. Uye kunyange zvazvo matambudziko avo ezuva ranhasi ari mavara uye akatoparadza dzimwe tsika dzetsika, kuchine zvakawanda zvekuona nekudzidza.
Kune nzira dzakawanda dzekuona zvikamu zvakasiyana zvechiChina tsika. Iwe unogona kutsvaga kubhabhatidzwa kana kutevera nzira yekare yekutengeserana yakadai seT ea Horse Trail kana kuSilk Road . Iwe unogona kutsvaga chimwe chetsika inokuda iwe tayi uye unovaka hozhe yakakomberedza nekushanyira mhepo inonzi China yakaitika . Kana iwe unogona kungozvitora nyore uye kuona nzvimbo dzinokurudzira iwe . Zvese zvaunoita nokukurumidza paunenge uchitsika netsoka muChina zvichava chiitiko chetsika.
Pandas uye Tigers Namakamera, Oh My!
Mukadzi wechidiki akatasva kamera murenje reChina. Matteo Colombo / Getty Images
Funga kuti ndeapi mhuka mbiri dzaungasimuka pedyo uye iwe pachako?
Uya kuChina uye iwe unogona kuona pandas guru muhupenyu hwavo hwepanyika kana iwe uri nerombo. Asi iwe unogonawo kuenda Chengdu uye unoshanyira nzvimbo yekubereka panda ikoko uye unovaona vachiswedera pedyo. Kuti uve nechipo chikuru, iwe unogona kutotora uye kubata mwana.
Iwe unogona kuenda kunzvimbo dziri kure kumadokero seGesu Province kuGwenga reGobi uye unotasva kamera. Iwe unogona kunge uchiwana kunyange imwe yebhadharo yakanamatira kune vatashanyi pazvikamu zvakakurumbira zveGreat Wall. Ngamera hazvirevi sezvinongoita pandas.
Uye nokuda kwechidiki, tine Tiger Tigers. Iwe haugoni kuwana chimwe cheizvi musango asi iwe unogona kuzviona mumapaki emhuka, ayo ari muHarbin .
China, View of Great Wall of China. Inigoarza / Getty Images
Iko kune zvimwe zviratidzo zvezvizvarwa zvenyika yekare: Great Pyramid , Macchu Picchu, uye Parthenon inouya mupfungwa. Huru Guru ndechimwe chezvinhu izvi uye chimwe chinhu icho kunyange iwe wakaona zviuru zvine mifananidzo, uchizviona uri munhu, uchikwira pamusoro payo, uchizviona, zviitiko zvakakodzera kufamba zviuru zvemairaira.
Kufara uye Kubudirira Kutenga
Kutenga mune imwe nzvimbo muChina. Tang Ming Tung / Getty Images
China yakagara iri nzvimbo yakakurumbira yevatengi vekutengesa. Kubva kuCurios kusvika kuii, zvipfeko zvekupfeka zvipfeko , zvigaro zveparera chaiyo kusvika pangobva muzvikwama zvidhina, kutenga kunogona kuwedzerwa. Iwe unogona kuunza kana kutenga sutukesi yakawedzerwa!
Chinese Spa. Liyao Xie / Getty Images
Kuchengetedza hakusi kurapa kwakakosha mune zvikamu izvi, zvakafanana nenzira yehupenyu. Kune marudzi akawanda emitambo yekurapa inonzi Chinese medicine, asi spas nemapurisa anokonzera mashesi anopa chero chinhu chipi zvacho chaunogona kufungidzira, pamutengo unonyatsokwana (kana iwe ukasara kunze kwemahotera mashanu-nyeredzi). Vanhu vazhinji vanopedza masikati pavanoshamba-dzimba seChina Xiao Nan Guo Spa muShanghai uko iwe unogona kuenda uye kudzika, kunongororwa, kuurayiwa, kugadziriswa nekudyisa zvose nokuda kwemutengo unonzwisisika. Uye iva nechokwadi kuti uwedzere rutsoka rwakanaka rwesheji kusvikira pakuguma kwezuva ripi neripi rekuona nzvimbo.
Nzvimbo iri muChitatori Province, China. Keren Su / Getty Images
James Cameron akawana fantastical landscape pfungwa dze Avatar kubva kuHunan Province yeZhangjiajie National Forest Park. Makomo e karst muLi River River inopoteredza Yangshuo inoratidza 20 RMB bank note. Ita kuti humwe rwendo rwaunotora runobuda iwe kuti uone zvimwe zvezvinoshamisa zvitsuwa zve China zvinofanira kupa.
Vakaroorana vachifamba-famba muCang Mountains, Dali, Yunnan, China, Asia. Ian Trower / Getty Images
Iwe unogona chaizvo. Usarega kurega kana mutauro uchive dambudziko kwauri. Kana uri kuronga zororo uye unogona kubhadhara mari, ita China kuve yakakomba zvikuru yezororo rako.
The Replica Park ye Ningbo, China
Gongfu Cha: Unyanzvi hwokugadzira uye unofarira Tea yeChina
Mufambiro weMufirivhi uye Mutsva Wekuenda kuChina munaJune
Nhungamiro Yokupemberera Gore Idzva reChinese muInlandland China
5 Great Winter Hikes muNew York State
Kudzoka kweBuzards yeHinckley
10 Zvikonzero Zvokushanyira "Munharaunda yeAmerica Yakanyanya Kupenya" Sunset Park
Baños, Ecuador: Volcanos, Zvishamiso, uye Vatariri
Barone Ricasoli Winery uye Brolio Castle muTuscany's Chianti Wine Region
Top 5 Zvinhu Zvose St. St.
Tsika Mazano Okuita Bhizinesi muAustralia
6 Matanho ekugadzirira Lake Tahoe Vacation
Rudo Runovhara muLondon